उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याइने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याइने
उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले कार्यभार सम्हालेका छन् । उनको नियुक्तिसगै उक्त सिमेन्ट उद्योगले दुई वर्षपछि महाप्रबन्धक पाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले न्यौपाने, काठमाडौंका ध्रुवबहादुर देवकोटा र कपिलवस्तुका भूप्रेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिस गरेको थियो ।
उक्तमध्येमा न्यौपानेलाई नियुक्त गरिएको हो । सिफारिस समितिमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, रामेश्वर खनाल र नारायण विंडारी रहेका थिए ।
न्यौपाने नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संघ, नेपाल बार एसोसिएसनमा सदस्य, नेपाल अटो मोबाइल्स संघ नाडामा महासचिवसमेत भइसकेका छन् । यसैगरी नागरिक ट्रस्ट फन्ड, नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल जस्ता सामाजिक संस्थामा आबद्ध छन् । उन शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा समेत व्यावसायिकरुपमा आबद्ध रहेका छन् ।
अर्थ विज्ञ, लेखापरीक्षक तथा कानून व्यवसायीसमेत रहेका न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
उनी हाल माछापुच्छे्र बैंकका सञ्चालकमा रहेका छन् । उनीसँग सञ्चालक समितिमा लेखा संयोजक तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिमा मुख्य जिम्मेवार भएर काम गरेको अनुभव छ ।
न्यौपानेसँग चौधरी ग्रुपमा महाप्रबन्धकका रुपमा दुईदशक लामो समय काम गरेको अनुभवसमेत छ । उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले २०७५ साल पुस २४ गते नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक भएसँगै उक्त पद खाली रहेको थियो । उदयपुर सिमेन्टले दुई वर्षपछि महाप्रबन्धका रुपमा न्यौपानेलाई पाएको हो ।
२०७७ माघ २ गते १६:५२ मा प्रकाशित
मेगा बैंकको अत्याधुनिक भर्चुअल सहायता सेवा, कसरी लिने यो सेवा ?
एसएलसी परीक्षा सुरु, कोही फेल हुँदैनन् यसपाली
फेरि यति धेरै संख्यामा उप-सचिवहरुको सरुवा, को-कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले १३.६४ प्रतिशत लाभांश दिने
अब हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा !